रोचक – Khabaarpati
October 16, 2021 adminLeaveaComment on ‘कमरेड’ शब्द खास अर्थ के हो ? यसको कसरी उत्पत्ति भयो ?
कमरेड शब्द स्पेनिश भाषाको कामाराडाबाट आएको हो। जसको शाब्दिक अर्थ कोठामा सँगै बस्ने साथी हुन्छ। कमरेड शब्दले राजनीतिक रंग फ्रान्सेली क्रान्तिबाट पायो। समाजवादी र मजदुरहरूबीच सम्वोधन गर्नका लागि प्रिय शब्द बन्यो–कमरेड। युरोपमा कमरेड शब्द उन्नाइसौँ शताब्दीमा निकै चल्तीमा थियो। समाजवादी आ’न्दोलनसँगै कमरेड शब्दको प्रयोग राजनीतिक वृत्तमा व्यापक भएको हो। भारतका नेहरूदेखि नेपाली काँग्रेसका संस्थापक विपी […]
एजेन्सी । हनिमुन मनाउन श्रीमानसंग बनारस भ्रमण गर्न पुगेकी एक विवाहित महिला एक्लै होटलबाट हराइन् । कोठामा जहाँ उनी बसिरहेकी थिइन्, त्यहाँ एक टिश्यू पेपर मा लेखिएको थियो ( म तिमी संग हुन चाहन्न। मैले दुई बर्ष अघि नै अर्कैसंग बिहे गरिसकेकी थिए । घटना जुलाई को हो, तर वाराणसीको भेलुपुर पुलिस स्टेशनमा अगस्टको दोस्रो […]
October 16, 2021 adminLeaveaComment on यी ७ बर्षकी बालिका, जसले सजिलै उठाउँछिन् ८० किलो तौल
काठमाडौं । हामिलाई थाहा नै छ, साना बालबालिकाहरु ठुलो तौलका सामान उठाउन सक्दैनन् । स्कुल हिडेका बालबालिकाले पनि गाह्रो मोनेर झोला बोकिरहेका हुन्छन् । तर एक यस्ता बालिका छिन्, जसले ८० किलो तौल उठाउने गर्छिन् । ७ बर्ष पुगेकी क्यानडाकी एक बालिकाले गह्रो सामान उठाउने गर्छिन् । क्यानडाकी रोरी भ्यान अन्य बालबालिका भन्दा भिन्न छिन् […]
October 16, 2021 adminLeaveaComment on एयरपोर्टमा ब्रा देखाएर ट्रोल भएकी उर्फी जावेद भन्छिन्, ‘पब्लिसिटी चाहिएको भए नाङ्गै जान्थेँ’ (तस्वीरहरू)
एजेन्सी । बिस बोस ओटीटीकी अभिनेत्री उर्फी जावेदलाई जति चर्चा रियालिटी शोमा मिलेको थिएन त्योभन्दा बढी उनले आफ्नो एयरपोर्ट लुकबाट बटुलिन्। पछिल्लो दिनहरुमा जावेदको एयरपोर्ट लुक भाइरल भएको थियो। जसमा उनी आफ्नो ब्रा देखाइरहेकी थिइन्। जावेदको यस लुकको सामाजिक सञ्जालमा निकै ट्रोल भयो। उनले लगाएको जिन्सको ज्याकेट यति छोटो थियो कि उनको भित्री पहिरण ब्रा […]
October 16, 2021 adminLeaveaComment on ६ सय जना महिला तथा युवतीहरु विवाहको लागि पुरुष नपाए पछि सामुहिकक रुपमा पुरुषको खोजी!!
मस्त जवानी, धपक्क बलेको रुप तर, अनेक चाहार्दा पनि विहेका लागि केटा नै भेटिँदैन ।युवतीहरुमा देखिएको यो समस्या ब्राजिलको हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो गाउँमा ३५ बर्ष मुनीका ६ सय जना अविवाहित महिलाहरु रहेका छन् । तर, अविवाहीत पुरुष भने १ जना पनि छैनन् । ६ सय जना महिला तथा युवतीहरु विवाहको लागि पुरुष […]
October 16, 2021 adminLeaveaComment on महिलाले अर्डर गरिन् चिकेन बर्गर, पहिलो गाँसमै भेटिन् मान्छेको औंला
एक महिलाले फास्ट फूड रेस्टुरेन्टमा चिकेन बर्गर अर्डर गरिन् । महिलाले बर्गरको पहिलो गाँसमै जे भेटिन्, त्यो देखेपछि उनको हा’ल’त ख’रा’ब भ’यो ।न्यूयोर्क पोस्टको रिपोर्ट अनुसार बोलिभियामा बस्ने इस्टेफनी बेनिटेज एक फास्ट फूड रेष्टुरेन्टमा बर्गर खान गएकी थिइन् । पहिलो बाइट लिँदा उनले केही कडा चिज महसुस गरिन् । जब बेनिटेजले के रहेछ भनेर हेरिन् […]
October 16, 2021 adminLeaveaComment on सूर्यबाट आउने आँधीबेहरीले पृथ्वी नष्ट हुने, जीवन बाँच्ने सम्भावना भएको ग्रहमा मानिस सर्ने
काठमाडौ । पृथ्वी आजका दिनमा हरेक खतराहरुसँग जुध्दैछ ।प्रायः पृथ्वीको उत्तर र दक्षिण ध्रुवमा एउटा रंगीन बत्ती देखिन्छ, जसलाई अरोरा भनिन्छ । अरोरा तब निर्माण हुन्छ जब सूर्यबाट चार्ज कणको हावा पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रसँग ठक्कर खान्छ ।सूर्यबाट आएको विकिरण मानव र जीव जीवनको लागि हानिकारक हुन सक्छ ।यस्तो अवस्थामा चुम्बकीय क्षेत्रले पृथ्वीको लागि सुरक्षा कवचको […]
October 16, 2021 adminLeaveaComment on सर्पले टोकेर श्रीमतीको मृत्यु भयो भनेका श्रीमानको पोल जब डमी टेस्ट गरियो त्यसपछि खुल्यो सबै रहस्य !
भारतको केरला प्रदेशको पुलिसले एक रहस्यमय घटना सुल्झाउनका लागि अनौठौ डमी टेस्ट सार्बजनिक गरेका छन्। उथरा घटनाको जाँच गरिरहेको टोलीले एक सर्प तथा डमीको सीन रिक्रिएट गरेको छ । टीमले बिशेषज्ञको साथमा यो जान्ने कोशिश गरेको छ कि यदि सर्प नर्मल ड’ स्छ भने चो’ टको निशान कस्तो हुन्छ तथा त्यसलाई जिस्काएर ड’सा ‘उँदा कस्तो […]
कतै घरमा यी चिज राख्नुभएको त छैन ? सावधान ! नत्र बन्नुहुनेछ कंगाल
October 15, 2021 adminLeaveaComment on कतै घरमा यी चिज राख्नुभएको त छैन ? सावधान ! नत्र बन्नुहुनेछ कंगाल
काठमाडौँ । आजको समयमा, प्रत्येक व्यक्ति वास्तु शास्त्र अनुसार आफ्नो घर बनाउन चाहन्छन्। तपाइँ र हामी सबैलाई भलाई र परिवारको समृद्धिको लागी वास्तु शास्त्रको महत्व थाहा छ। तर कहिलेकाहिँ केहि हुन्छ कि हामी चीजहरु को बारेमा थाहा पाउन सक्दैनौँ जुन वास्तवमा मा हाम्रो परिवार को लागी राम्रो हुँदैन। यी साना कुराहरुले हाम्रो परिवारमा धेरै नकारात्मक […]
October 15, 2021 adminLeaveaComment on केराको बोक्राको पनि यति महत्वपूर्ण छ फाइदा, जान्नुहोस् आफै छक्क पर्नुहुनेछ
काठमाडौँ । केरा खानेका सबै फाइदाहरू नै छन् तपाईलाई थाहा नै छ, तर आज भन्दा पहिले तपाईंले सुन्नुभएको छ कि केराको बोक्राबाट पनि फाइदा हुन्छ। आज हामी तपाईंलाई केराको बोक्राको त्यस्तै एक फाइदाको बारेमा बताउन जाँदैछौं जुन तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंको जीवनको यस्तो समस्या समाप्त हुनेछ, जसको बारेमा तपाईंलाई थाहा नै छैन। त्यसोभए ढिलाइ […]